GGM oo war-saxaafadeed ka soo saaraya arrimaha doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
GGM oo war-saxaafadeed ka soo saaraya arrimaha doorashada
Golaha Midowga Musharixiinta Soomaaliya, oo maalintii saddexaaad shir uga socdo, Huteel Jasiira ayaa maanta kulan la leh Ururrada bulshada rayidka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa maalintii saddexaad galay shirka Golaha Midowga Musharixiinta Soomaaliya, ay kaga arrinsanayaan xaaladaha ku soo kordhay arrimaha doorashooyinka, waxaana la filayaa in ay war-murtiyeed soo saaraan saacadaha soo socda.
Waxa ay shalay kulan la qaateen Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Dadban, halka ay maanta kulan kale la qaadanayaan Ururrada bulshada rayidka ah.
Waxay Musharixiinta muujiyeen inaysan ku faraxsanayn qaabka loo maareynayo doorashadda labada Golle ee Baarlamaanka, oo faragelin badan ay ka jirto, iyadoo Villa Somalia ka shaqeynayso inay kusoo saarto Xildhibaanada u codeeya Farmaajo Oct 10.
Musharixiinta walaacood ayaa yimid kadib markii doorashooyinkii Aqalka Sare ee ka dhacay Koonfur Galbeed, Galmudug, Jubbaland iyo Puntland ay kusoo baxeen rag isku siyaasad ah, oo qaab aan xor iyo xalaal ahayn lagu soo saarey.
Madaxdii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa kamid ah ragga ugu tunka weyn ee hormuudka u ah Midowga Musharixiinta, oo ku kulmay ugu yaraan 15 Musharax oo isku kaashanaya sidii Farmaajo uga takhulusi lahaayeen.
Doorashadda Soomaaliya waa mid dadban, oo qaab xulis ah ku imaanayaan Xildhibaanada labada Aqalka [Aqalka Hoose: 275 iyo Aqalka Sare: 54], kuwaasoo shir mideysan ku dooranaya Madaxweyne Oct 10, waxaana tartanku yahay mid musuq-maasuq ka jira, oo codka la iibsado.